Kungakhathaliseki ukuthi sizama kangakanani ukuzikhawulela "ukuphuma" nge-sidecar, kunzima ukwenza ngaphandle kwemoto ... Yini ongayisho ngomama, onayo yonke indlu emahlombe akhe nokuthi ubani ozoqhubeka nokugcina umntwana kuyo yonke indawo! Futhi mane ufike e-polyclinic, echibini noma epaki ngaphandle kwemoto akulula.
Ekuqaleni "kwezingubo zokuhlala zezingane", izihlalo ezincane zenzelwe ukuvikela umshayeli ukusuka emaphandleni wengane kunokuba zivikele ingane emgwaqeni, zilungise izingane ngokusemthethweni. "Kungakhathaliseki ukuthi manje! Phakathi kwezinhlobonhlobo ezinikezwa namuhla zihlala zonke izintandokazi nobudala. Isihlalo semoto sokukhulisa izingane ezincane usana olusanda kuzalwa liza isihlalo-shintsha, "sikhule" kalula nomntwana. Ekuphepheni kwemvuthu emotweni kubalulekile ukucabangela ngisho nangaphambi kokuba azalwe - vumela imigwaqo ibe lula, uqale indlela esuka esibhedlela. Ngeshwa, ngisho nangenkinga yokuphikisana okulula, izandla zikamama ngeke zibe ukuvikeleka okunokwethenjelwa kwesikhala esincane esincane, ngakho-ke kungcono ukungabi nengozi, ngoba umgwaqo awunakulinganiswa. Izindlela eziyisisekelo zokukhetha zilula. Ngenkathi ingane ingakwazi ukuhlala yodwa, ihanjiswa kuphela endaweni yokuhlala. Umzimba kanye nenhloko ye-crumb kufanele iqiniseke ngokuqinile, inikeze izinyanga eziyisithupha kusukela ekuhambeni okude.
Okukhethwa kukho okungcono kunomnyaka owodwa kuyisihlalo semoto sokukhulisa izingane ezincane, ezihambisana nemoto. Amantombazane emotweni avame ukulala futhi kubalulekile ukuthi isihlalo sihanjiswe kalula endaweni "yokuphumula." Thola ulwazi lokuthi izibonelo ezihlukene zezihlalo zezimoto zokukhulisa izingane ezincane zibonise ngesikhathi sokuhlolwa okukhethekile, kodwa ungakhohlwa ngokulula, ngaphandle kokuphepha. Uma isikhwama sezingubo siphelele ingane ngokuphakama nesisindo, uma singacindezeli noma yini futhi siphazamise, ilanga lakho lizohamba ngenjabulo, futhi uzoba nohambo olumnandi nokuphumula.
Izinzuzo: ukuklama kwasekuqaleni nokusebenza okukhulayo. Kulula ukuzivumelanisa nokukhula kwengane - kuyasiza ukucindezela inkinobho, futhi ivula njengembali - "ikhula" ngokuphakama nobubanzi. Kunezinketho ezimbili zokuthola isihlalo semoto - i-TwinFix.
I-attachfix attachment kanye nokuvikelwa komthelela ohlangothini kuqinisekisa izinga eliphezulu lokuphepha. Izibhamu zokulungisa, i-headrest ne-backrest, upholstery - izicubu ze-hypoallergenic.
Kuthathwa njengesihlalo semoto esiphephile kakhulu sokukhula kwezingane ezincane eYurophu. Ukulungisa ingane ngokuqinisekile, hhayi ukuvimbela inkululeko yokunyakaza. Uzibophezele izikhundla zokulala nokuhlala, kanye nezikhundla ezine ezibuyiselwe emuva.
Ngaphandle kokusetha okujwayelekile, kunokufaka okungeziwe okufakiwe okuncane kakhulu, kanye nephaketheni eliyimfihlo lezinto ezincane, nokulungiswa kwe-backrest ezindaweni ezingu-3 - kusukela ekuhleleni kuya kwesigamu.
Isihlalo sabakhubazekile sokuhamba kwezinsana kusukela ekuzalweni kuya ezinyangeni ezingu-15, sinesikhundla sokulala nokuphumula, ukwesekwa kokusekela kanye nekhanda lokubeka ikhanda. Ukwengeza, isibambo esithwalayo, ikhava elikhishwayo kanye ne-sun enwning ifakiwe.
Izibhande zokuhlala ezinamathele aphansi futhi ukulungiswa kokuphakama kwezinyathelo ezintathu kuvumela lesi simangaliso esiyingqayizivele ukuba "sikhule" nengane.Umzimba wenziwe ngezinto zokwakheka kwemvelo.
Umklamo ojulile kanye nomklamo ovuzayo uzokuvikela ukuba ungangeni emgwaqeni ongalingani, kanti ukufakwa okukhethekile kuqinisekisa ukusekela okufanelekile komgogodla wengane. Ukuvalwa okuphakathi kwebhande lokuphepha ngehlelo elikhethekile kuqinisekisa ukuvalwa kwezikhiye.
Ubukhulu obukhulu besakhiwo buqinisekisa isimo esifanele sekhanda namagxathu wengane. Uhlaka lwangaphakathi lwe-polystyrene lonakalisa ukwethuka ngesikhathi kuhamba imoto. Kusukela ezinyangeni ezingu-12 kuya eminyakeni engu-12 (emuva - ekhishwayo).
I-calcium iyi-microelement ebalulekile empilweni yengane
Izifo zezipikili kanye nezithende zomntwana
Indlela yokuvikela ingane kumaphupho amabi?
Ukusikhipha kwezingane nge-scoliosis
Ukungezwani kokudla emntwaneni: izimpawu, ukwelashwa
Izithelo ze-Ginger candied
Kulimaza ukubhema kwabesifazane
Ifomula yothando emshadweni
Ithanga ne-apple dessert
Ukuzivocavoca nokunye okuqeqeshwayo kwabesifazane abakhulelwe
Izinzuzo zomsebenzi wezimoto
Nika inyama yenkomo nge-ukhilimu omuncu ushizi
Isobho nge vermicelli
I-Baked sea bass